'जेठी भन्छे पानी, कान्छी भन्छे घाम! म एक्लो बुढो कतातिर जाम्!' सानैमा गाउँतिर सुनेको यो उखान अहिले एमाओवादीकालागि चरितार...
Posted by Dr. Baburam Bhattarai on Sunday, September 6, 2015
सशस्त्र प्रहरीले राती साढे १० बजेतीर कुटपिट गरी घाईते...लहान , २१ भाद्र । लहानमा भाषण गरेको ३ घण्टापछि सद्भावना पार्टी...
Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, September 6, 2015
Ang Kaji Sherpa lai rihyai garrrr !
Posted by केशामी सरूम्बा on Saturday, September 5, 2015
Leaving from Kalaiya...!found...excessive use of force and super violation of HRhere. More importantly, the peope are seeming more conscious politically...now they are seeking to get organized underasingle political flagggg...!
Posted by Dipendra Jha on Sunday, September 6, 2015
काठमानडाैं बाट भरदाहा सप्तरी अाउदै गरेकाे मुनाल यातायात काे बस न. 7005 मा मधेशी हाे भनी कुटपिट गरि उमेश सरमा लाई बसकाे झयाल बाट बाहिर फालेपछी गम्भीर घाईते भएकाे छ।
Posted by Vijay Kumar Sah on Sunday, September 6, 2015
शान्तिका अनुयायीहरु सडकमा निस्कनु परेपछि । धर्मरिनपेक्षताको पक्षमा काठमण्डौंको बबरमहलमा भएको बृहत र्याली ..............
Posted by Sanchu Blon Tamang on Sunday, September 6, 2015
पहिचान विरोधी नेताहरुका श्रीमति बनेका नेवा चेलीहरुलाई कवि राजभाइ जकमीको आह्वान ...............
Posted by Sanchu Blon Tamang on Sunday, March 22, 2015
काठमण्डौंमा तामाङहरुको मार्चपास ..........
Posted by Sanchu Blon Tamang on Wednesday, August 26, 2015
मधेस स्वतन्त्र भइयो भने सि के राउत भन्दा पनि बढी सुशील, के पि, झल नाथ, माधब, बाम देब, कृष्ण प्रसाद, प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता नेता धन्यवाद का पात्र हुनेछन।
Posted by Lokendra Yadav on Sunday, September 6, 2015
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा बसोबास गर्ने मधेशीहरुले मधेश आन्दोलनमा सेना परिचालन गरिएको विरोधमा अमेरिकाको अस्टिनस्थित गभर्नर कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । मधेशमा भइरहेको अधिकार प्राप्ति आन्दोलनमा सेना परिचालन उचित नभएको अस्टिन मधेशी समाज युएसए, टेक्सास (Austin Madheshi Society USA, Texas) ले जनाएको छ। युएसए टेक्सासको राजधानी अस्टिनमा मधेशी समुदायले गभर्नर कार्यालयको अगाडि तीन घण्टा धर्ना दिएको हो । समाजले मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारका लागि शुक्रबार ने.रु. पाँच लाख सहयोग समेत पठाएको थियो ।
Madhesh madhesi janajati kranti 2015 Nepal Terai Tharuhat